बारफोनबाटै यसरी गर्नुहोस् डिजिटल कारोबार - Tech News Nepal Tech News Nepal
बारफोनबाटै यसरी गर्नुहोस् डिजिटल कारोबार
काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानी सेवाप्रदायक प्रभु पेले बारोनबाट कारोबार गर्न सकिने फिचर ल्याएको छ । स्मार्टफोन नहुने प्रयोगकर्ताका लागि लक्षित गर्दै सुरू भएको यो सेवाबाट डिजिटल बैंकिङ कारोबारको पहुँच नभएका मानिस लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ ।
यसमार्फत बारफोन प्रयोग गरेर मोबाइल रिचार्ज गर्ने, इन्टरनेट, बिजुली, टेलिफोनको बिल तिर्ने लगायत काम गर्न सकिन्छ । त्यतिमात्रै नभएर रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न र पठाउनसमेत सकिने छ । त्यसका लागि कुनै एपको आवश्यक पर्नेछैन ।
कम्पनीले यसको सुरुवात कोरोनाको कारण गत वर्ष सरकारले लागू गरेको लकडाउनको समयबाट गरेको थियो । कोरोनाका कारण लकडाउनको परिस्थितिमा बाहिर जान नपाएको समयमा सबैलाई बैंकिङ पहुँच पुर्‍याउने उदेश्यका साथ यो सेवा सुरुवात भएको छ । जुन अब सँधैका लागि सान्दर्भिक हुने भएको छ ।
यसरी सुचारु गर्नुहोस् सेवा
यो सेवा प्रयोग गर्न प्रयोगकर्तासँग एनसेलको सिमकार्ड भने अनिवार्य छ । कम्पनीका अनुसार हाल यो सेवा एनसेलको सिममामात्रै उपलब्ध रहेको छ ।
यदि तपाईंसँग एनसेलको सिमकार्ड छ र बारफोनबाट कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागि सुरुमा प्रयोगकर्ताले म्यासेज बक्समा ‘rg’ लेखी त्योसँगै आफूले राख्ने ४ अंकको ‘MPIN’ (उदाहरणको लागि १२३४) लेखि ३१०४१ मा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो गरेसँगै तपाईंको मोबाइल नम्बर प्रभु पेमा दर्ता हुनेछ । जसको जानकारी तपाईंलाई म्यासेजमार्फत प्राप्त हुनेछ । सिम दर्ता भएसँगै सुरुमा तपाईंले आफूले कारोबार गर्दा प्रयोग गर्ने पिन सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसका लागि तपाईंले ‘PNMPIN’ टाइप गरी पुनः ३१०४१ मा म्यासेज पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी म्यासेज गर्दा त्यहाँ तपाईंलाई आफूलाई सहज हुने पीन सेटअपको लागि विकल्प दिनेछ ।
यसरी तपाईंले एमपीन सेटअप गरेसँगै तपाईंले अब कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ ।
कुन कुन सेवा उपलब्ध छ, कसरी हेर्ने ?
प्रयोगकर्ताले बारफोनबाट सम्भव हुने सेवाहरु कुन कुन छन भनी सहजै हर्ने सक्नेछन् । त्यसका लागि प्रयोगकर्ताले *८३१०४१*MPIN# टाइप गरी डायल गर्नुपर्छ ।
त्यसरी डायल गर्दा त्यहाँ विभिन्न विकल्प देखाउने छ । त्यसमध्ये आफूले कुन सेवा उपभोग गर्न लागिएको हो । उक्त सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
सेवा छनोटका लागि कुन विकल्प आफूले प्रयोग गर्न खोजको हो उक्त विकल्पको नम्बर टाइप गरी सेवा लिन सकिन्छ ।
कम्पनीका अनुसार यसबाट मोबाइलको रिचार्ज, बिजुली, इन्टरनेट, टेलिफोनको बिल भुक्तानी गर्नका साथै रेमिट्यान्स पठाउन र प्राप्त गर्न, भोटिङ गर्न सकिने छ । त्यसरी कारोबार गर्दा हुने पठाइएको म्यासेजको कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
वालेटमा कती पैसा बाँकी छ ?
तपाईंले वालेटमा अर्काे वालेटबाट पैसा पठाएर, प्रभु पेका विभिन्न ठाउँमा उपलब्ध एजेन्ट तथा नेटवर्क, विभिन्न ठाउँमा उपलब्ध रहेका किओएस मसिनबाट तपाईंले पैसा लोड गर्न सक्नुहुनेछ ।
यसरी लोड गरेको पैसा आफ्नो बालेटमा कति बाँकी छ भनेर स्मार्टफोनमा त सहजै हेर्न सकिन्छ । तर, बारफोनमा कसरी हेर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ । त्यसका लागि पनि प्रभु पेले सहज तरिका उपलब्ध गराएको छ ।
बारफोनबाट कारबोबार गर्ने प्रयोगकर्ताले ‘BLMPIN’ टाइप गरी ३१०४१ मा म्यासेज पठाउनु पर्नेछ । यति गरेसँगै तपाईंको मोबाइल तपाईंको बालेटमा उपलब्ध पैसाको जानकारी म्यासेजमा उपलब्ध हुनेछ ।
आफूले गरेको कारोबार कसरी हेर्ने ?
स्मार्टफोनमा उपलब्ध हुने वालेटमा हामीले ‘स्टेटमेन्ट’ को छुट्टै सेक्सन भेट्छौं । जहाँबाट हामीले हाम्रो कारोबारको जानकारी लिन सकिन्छ । यो फिचर स्मार्टफोनमा निकै नै लोकप्रिय भएकाले पनि कम्पनीले बारफोन प्रयोगकर्तालाई पनि यो फिचर उपलब्ध गराएको छ ।
बारफोन प्रयोगकर्ताले पनि ‘STMPIN’ टाइप गरी ३१०४१ मा म्यासेज पठाएर आफूले गरेका पछिल्ला तीन कारोबारको जानकारी लिन सक्नेछन् ।
यसरी तपाईंले बारफोनबाटै अनलाइन कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ ।